Umakhi We-Jacking System | Ikhwalithi ephezulu nobuchwepheshe obuthuthukisiwe - I-Ever-Power
Lezi zinhlelo zohlelo lwejacking noma ukumiswa kungakhelwa ngaphakathi kwamafomethi amaningi ngokusebenzisa amabhokisi wama-bevel, ama-motors, amabhokisi wamagiya wokunciphisa, ama-drive shafts, ama-couplings, ama-plummer block namadivayisi wokulawula ukunyakaza.
Ukucushwa kwesistimu enkulu kunazo zonke kuzoba yi-'H ',' U ',' T 'ne-'I' amise amasistimu we-jacking. Qaphela ukuthi ama-screw jacks amaningi angaxhunyaniswa ndawonye ngokusebenza ngamandla noma ngogesi. Owesibili uyasiza uma singekho isikhala sokuxhuma imiphini yedrayivu.
H-Ukucushwa Jacking System
I-Ukucushwa Jacking System
T-Ukucushwa Jacking System
U-Ukucushwa Jacking System
Isebenza kanjani iJacking System
Umkhiqizo we-screw jack kulapho kuqhutshwa khona isikulufa jack ku-symphony ukuthola ukunyakaza okuqondile. Ukuhlelwa kwesistimu ye-jack jack kungaziwa nangokuthi "uhlelo lwe-jacking".
Ithuba lokuxhumanisa i-screw jacks amaningi ndawonye ukuze bahambise i-symphony liphakathi kwezinzuzo zabo ezinhle kakhulu. Izinhlelo ezijwayelekile zifaka ama-screw jacks, amabhokisi wamagiya we-bevel, ama-motors, amabhokisi wamagiya okunciphisa, ama-drive shafts, ama-couplings kanye ne-plummer block.
AmaJacking Systems anezici ezi-2 eziyinhloko:
Zivumela ukunyakaza kwemithwalo emikhulu eqhutshwa ngenjini eyodwa isb. 4 x ME18100 amajack screw afakwe ngaphakathi kohlelo lwe-screw jack angahambisa ama-400 Te (4000kN) amaningi.
Imithwalo esekela ngokulingana ngaphezu kwendawo enkulu uma kuqhathaniswa isb.I-20Te ilayisha ngaphezu kwendawo engama-24m2 kusetshenziswa ama-jack screw amane ane-6m x 4m space spacing.
Amasistimu ejacking ajwayelekile axhumene phakathi kwento ngayinye eqhutshwa ngaphakathi kohlelo. Noma kunjalo izinhlelo ezixhunywe ngamadijithali nazo zingatholakala. Ngesikhathi salezi zinhlelo ama-screw jacks ngawodwa ahamba ngezimoto futhi avumelaniswa nohlelo lokulawula ngogesi kanye ne-loop yempendulo evaliwe. Lokhu kungaphinde kwandiswe ukuqinisekisa ukuthi amasistimu ama-jacking axhumene namarobhothi avumelanisiwe / alawulwa ngokwedijithali avumela izindlela zokuhambisa umugqa oqondile ukuthola okunikezwayo ngesilinganiso esikhulu.
Ivumele i-Power Jacks ukuthi inikeze izixazululo zohlelo lwe-jacking emikhakheni eminingi. Izindawo zohlobo lokukhiqiza noma ngabe zensimbi, ezomphakathi, ezezimoto, iphepha noma amandla kungaba abasebenzisi bokuqala bezinhlelo ze-jacking kepha izicelo zesibonelo izinkundla zezemidlalo, ezokuxhumana kanye nocwaningo nazo zisebenzisa amasistimu we-jacking wemiklamo emikhulu nemincane.
Kungakhathalekile ukuthi i-Power Jacks yesicelo inakho ukuqonda nesipiliyoni esiqinisekisa ukuthi abathengi bazothola isisombululo sohlelo lwe-jacking.